Ihe niile ịchọrọ ịma banyere Teide Volcano | Network Meteorology
Teide ugwu mgbawa
Mgbe anyị na-ekwu maka ugwu kachasị elu na Spain anyị na-ekwukarị Ugwu Teide. Ọ dị n'àgwàetiti Tenerife nke otu agwaetiti nke Canary Islands. Ọ bụghị naanị ebe kachasị elu na Spen, kamakwa ala niile dị n'etiti Oke Osimiri Atlantic. Na Teide ugwu mgbawa A na-ahụta ya dị ka ugwu nke atọ kachasị elu n'ụwa mgbe atụpụtara ya na ntọala nke oke osimiri. Ọ na-atụle otu nke kasị ukwuu na-adọrọ mmasị na Spain ebe ọ bụ na ọ dị na Teide National Park. UNESCO akpọọla ya Ebe Nketa Worldwa.
Maka ebumnuche ndị a niile, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị gbasara njirimara niile, ọdịdị ala, geology, ntọala na ịmata ihe nke ugwu Teide.
2 Nhazi nke ugwu Teide
3 Ihe mgbawa ugwu
4 Curiosities nke Teide ugwu mgbawa
Maka ndị mbụ nke mpaghara ndị a, Guanches, ugwu Teide dị ka ugwu dị nsọ. Taa, ọ bụ otu n'ime ugwu ugwu mara mma n'ụwa niile. Ọ bụ a stratovolcano ma ọ bụ ọtụtụ ihe mejupụtara ugwu mgbawa. Nke ahụ bụ, e guzobere ya kemgbe ọtụtụ nde afọ site na nchịkọta nke usoro lava na-esote. Ma ọ bụ na lava na-agbakọta ma na-ajụ oyi ka ọ na-aga site na ebe ndị dị elu. Ọ bụghị naanị na lava na-agbakọta, kamakwa ihe siri ike. Ihe ndị a niile pụtara na ihe agbakwunyere agbakwunye na-ewere ọnọdụ ruo mgbe ugwu mgbawa dị n'ọnọdụ ya ugbu a.
Uzo dum nke ugwu Teide di na Cañadas. Las Cañadas bụ ugwu mgbawa nke nwere akụkụ dị n’agbata kilomita iri na abụọ na iri abụọ n’obosara. Mkpokọta elu Teide dị mita 3.718 n’elu oke osimiri. Ọ bụrụ na anyị deba aha ya n'akwụkwọ dị ka ihe dị iche na ịdị elu n'elu oké osimiri, anyị nwere ike ịhụ na e nwere elu nke 7500 mita.
Osimiri Teide, ya na Pico Viejo ugwu mgbawa, na-etolite otu stratovolcano. Nke a bụ ugwu mgbawa ugwu. Ha abụọ na onye nke ọzọ hiwere n'otu ime ụlọ ahụ na-eme anwansi. Nọmalị, mgbe ị na-akọwa ugwu mgbawa ọ na-eme iche iche. N'etiti ha abụọ, a na-ahụta ugwu Teide dị ka onye kacha arụ ọrụ. Edere ikpeazụ ya na mgbawa na 1909. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe karịrị otu narị afọ agafeela, na ọnụ ọgụgụ nke geological oge a na-ewere nke a nọ n'ọrụ ugwu mgbawa.
N'ime oge oyi, anyị nwere ike ịhụ etu snow si ada na elu ugwu ma na-enye ọmarịcha ala maka ọtụtụ nde ndị ọbịa na National Park. Nke a na-eme Tenerife ebe dị ezigbo mkpa njem nleta na oge niile n'afọ.
Nhazi nke ugwu Teide
Ka anyị leghachi anya azụ na geological oge iji ruo na esthetic mgbawa si malite. Ahọpụtala m agwaetiti Tenerife niile n'oké osimiri na-eso ugwu mgbawa. Nke a mere n'oge oge Miocene na mbido Pliocene. N'oge ahụ, ugwu ọta 3 agbapụtara pụtara na Ha bụ Teno, Adeje na Anaga massifs. Ugwu ọta ndị a dị egwu mebere ọtụtụ ala nke ebe bụ Tenerife ugbu a.
Na ọkwa dị iche iche ndị a 3 massif kwụsịrị na-agbawa ha na oge ọhụrụ nke mgbawa ugwu malitere na nke e guzobere ụlọ ọhụrụ. Ejiri ntọala nke atọ nke caldera guzobere n'oge nke atọ ma gbanwee na Miocene niile. Nke a bụ otu esi guzobe calñda Cañadas n'ihi oke ọdịda nke nnukwu mgbawa na ugwu na-esote na ngwakọta nke ihe abụọ ahụ.
Ugbua ka ọ dị ugbu a n'oge Pleistocene, anyị nwere ike ịhụ na e mebere ogige Teide-Pico Viejo n'ime caldera.
Ihe mgbawa ugwu
Na mbụ anyị kwuru na ugwu mgbawa a nọ n'ọrụ. Oge mgbawa ugwu ikpeazụ edekọtara na 1909. Ntuli aka a were ụbọchị iri. Dị Smithsonian Institution Global Volcanism Mmemme nke a raara nye imuta ugboro nke ugwu oku. N'ụzọ dị otú a, anyị na-akwado maka ọdachi ndị ọ nwere ike ịkpata. Enwere ntiwapụ nke na-akpata oke mbibi na ndị bi na ya ga-apụ. N'okwu a, mmemme a egosiputa ogbugba iri anọ na atọ nke 42 n'ime ha akwadoghị.
Ma ọ bụ na oghere nke ọkụ ugwu Teide emeela ihe pyroclastic zuru oke kemgbe e guzobere ya. Otu o sila dị, ugwu mgbawa izizi a hụrụ bụ na 1492. Ngbawa a mere ka agwaetiti Tenerife na-agbanwe agbanwe ogologo oge. Naanị mgbawa na nzuko mere na 850 AD
Ọ dabara nke ọma, enweghị ndị mmadụ bi n'akụkụ ugwu a, yabụ ihe egwu ya adịghị elu. Onwere ugwu ndi ozo di na uwa ebe ebe ihe ruru 100 kilomita kari ndi mmadu 766000. Ọ bụrụ na enwere mgbawa na agwaetiti Tenerife ọ dịghị njọ dịka ebe ndị ọzọ.
Curiosities nke Teide ugwu mgbawa
Anyị ga-agwa gị ụfọdụ ihe ịchọ ịmata nke ikekwe ị maghị maka ugwu a.
N'ime ogige mba ahụ, enwere ebe karịrị 1.000 saịtị. Nkwụnye ego ndị a sitere na oge Guanche nke na-ekpughe ozi zuru oke gbasara ụdị ndụ dị n'oge ahụ.
Isi nke Teide were 40.000 afọ iji gbaghaa. Ọ bụ ezie na oge a yiri ka ọ bụ ogologo oge, ọ bụrụ na anyị kwuo okwu site na mbara ala, ọ bụ obere oge. Ya mere, enwere ike ikwu na ikuku bụ ugwu na-eto eto.
Ala ndị gbara ugwu mgbawa ọkụ so na ndị na-eme nri na mbara ụwa niile. Nke a bụ n'ihi na ntụ sitere na ugwu mgbawa na-enye ala nri na-edozi ahụ.
Mgbawa ugwu nke ugwu a na-agbọpụta ọkụ edebeghị aha ndị mmadụ ọ bụla metụtara. Nke a na - eme ka ọ dịrị mma ibi na Tenerife.
Shapesdị nke ugwu mgbawa a nwere dị obere ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na ugwu mgbawa ndị ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ụdị ugwu mgbawa mara mma na otu nke kachasị mma n'ụwa. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu Teide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Teide ugwu mgbawa
Oke Osimiri Antartic